Governemanta vaovao : ny tonta ihany no navadibadika amin’ireo minisitra | NewsMada
Governemanta vaovao : ny tonta ihany no navadibadika amin’ireo minisitra
Par Taratra sur 16/04/2016
Tafatsangana, omaly ny governemantan’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana. 12 ireo minisitra vaovao amin’ireo 32 notendrena… Tsy tena vaovao koa anefa fa efa fantatra ny sasany amin’izy ireo… Ny tonta ihany no navadibadika… Nambara fa vonon-kiady amin’ny fahantrana sy hijery ny sosialim-bahoaka ?
Niova seza fotsiny ihany ny maro amin’ireo minisitra vao notendrena. Lasa minisitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika misahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany Rafidimanana Narson. Nisahana ny minisiteran’ny Varotra ny tenany teo aloha. Tahaka izany koa, niova ho minisitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika hisahana ny Fambolena sy ny fiompiana Rakotovao Rivo raha minisi-panjakana momba ny Fanajariana ny tany teo aloha izy. Anisan’ny mahabe resaka ity minisitra iray ity, indrindra eo amin’ny fanajariana ny tany sy ny tanàna. Niova seza, lasa minisitry ny Rano raha nisahana ny Fambolena teo aloha Ravatomanga Roland, hany sisa tavela amin’ireo minisitry ny Tim amin’izao fitondrana izao.
Tafajanona amin’ny toerany ny minisitra isany, Atallah Béatrice eo anivon’ny Raharaham-bahiny, anisan’ireo vehivavy dimy eo anivon’ity governemanta ity. Mbola eo amin’ny sezany ny Jly Raveloharison Herilanto, misahana ny Toekarena ; Andriamanarivo Mamy Lalatiana ho an’ny Fahasalamana ; Rabary Paul eo anivon’ny Fanabeazam-pirenena ; Maharante Jean de Dieu, misahana ny asam-panjakana. Manampy azy ireo, mbola eo koa ny minisitry ny Fampianarana Ambony, Rasoazananera Marie Monique ; ny minisitry ny Paositra, Rakotomamonjy Neypatraiky, sy ny minisitry ny Fifandraisana, Andrianjajto Vonison ary ny minisitry ny Fanatanjahantena, Andriamosarisoa Anicet miaraka amin’ny minisitry ny Mponina, Realy Onitiana. Mbola mijanona ho minisitry ny Vola kosa Rakoarimanana Gervais sy ny minisitry ny Atitany, Mahafaly Solonandrasana, ankoatra ny maha Praiminisitra azy.
Ireo minisitra 12 vaovao
Nesorina kosa ny minisi-panjakana Lalaharisaina Valerien ka nisolo azy ny minisitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, hisahana ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika, Zafilahy Ying Vah. Niova andraikitra, lasa minisitry ny Fiarovana ny Jly Rasolofonirina Béni Xavier raha Cemgam teo aloha. Nilaza ho tsy nazoto intsony noho ny antony manokana avy aminy ny minisitra teo aloha, ny Jly Rakotozafy Dominique, raha nanontaniana amin’ny tsy maha ao azy intsony.
Niakatra ho minisitry ny Fitsarana kosa Andriamiseza Charles, efa sekretera jeneralin’ity minisitera ity. Anton’ny nanesorana ny minisitra teo aloha, Ramanantenasoa Noeline, ny olan’ny mpirakidraharaha sy ny mpandraharaha ny fonja.
Minisitry ny Filaminam-bahoaka i Anandra Norbert, nisolo an-dRandimbisoa Blaise Richard.
Minisitry ny Indostria, Nourdine Chabani, filohan’ny Antenimieran’ny varotra any Taolagnaro. Misahana ny Varotra sy ny fanjifana ny minisitra Tazafy Armand, nisolo ny toeran-dRabesahala Henri. Hisahana ny minisiteran’ny Asa vaventy Razafimandimby Eric nosahan’ny minisitra Ratsiraka Roland teo aloha, lasa minisitry ny Fizahantany indray izao.
Minisitra tamin’ny Tetezamita voaantson’ny fitsarana
Niverina amin’ny sezany fony Tetezamita kosa Rabenjamina Benjamina, minisitry ny Fitaterana. Efa minisitry ny Tetezamita ary efa nampiantsoin’ny Bianco sy teny anivon’ny fitsarana « Chaine penal » momba ny « Raharaha Jirama » ny minisitra vaovao, Ramanantsoa Rodolphe, hisahana ny Angovo. Tahaka izany koa, efa minisitry ny Fampianarana teknika tamin’ny Tetezamita ny depiote Raharimalala Toto Lydia ary mbola hisahana izany minisitera izany izao. Tafaverina minisitra ny depiote Rabenirina Jean Jacques ka hisahana ny Kolontsaina raha nisahana ny Fanabezam-pirenena tamin’izany. Lasa minisitry ny Tontolo iainana raha nisahana ny rano teo aloha Ndahimananjara Johanita. Voailika ny minisitra teo aloha, Beboarimisa Ralava. Minisitry ny Jono i Gilbert François. Lasa nisy minisitra lefitra misahana ny Raharaham-bahiny sy ny fiaraha-miasa ary ny fampandrosoana, Rafatrolaza Bary Emmanuel amin’ity governemanta ity. Tahaka izany koa ny sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Jono hisahana ny ranomasina, hosahanin-dRandrianarisoa Léonid Ylenia.
Niova anarana nefa mbola eo amin’ny toerany kosa ny Jly Paza Didier, sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena misahana ny zandarimaria.